Blog – Support Desk
💡Websiteတစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုရင￼￼် အရင်ဆုံးသိထားသင့်တဲ့ Websiteအမျိုးအစား ၇ ခု
👨‍💼သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Websiteတစ်ခု ဖန်တီးမယ်လို့ စဉ်းစားနေပြီဆိုရင် အရင်ဆုံး သိထားရမှာက ကိုယ်က ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘာကြောင့် Websiteကို ဖန်တီးချင်တာလဲ? Websiteတစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ၊ ဘယ်လို အကျိုးအမြတ်တွေကို မျှော်လင့်တာထားတာလဲ?ဘယ်လို Websiteအမျိုးအစားကို လုပ်ချင်တာလဲ? စတာတွေကို သေသေချာချာ သိထားရပါမယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကိုယ့်အတွက်၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘယ်လို Websiteအမျိုးအစားကို ဖန်တီးချင်တာလဲဆိုတာကို တိတိကျကျ သိနိုင်ဖို့အတွက် Websiteအမျိုးအစားတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲက Popularအဖြစ်ဆုံး၊ အသုံးများဆုံး Websiteအမျိုးအစား ၇ခုကို ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။ 📌Corporate Websiteအွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအကြောင်း၊ လုပ်ငန်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုအကြောင်းကို ဖော်ပြပြီး ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို Customerတွေ ဝယ်ချင်လာအောင်၊ Awareness ဖြစ်သွားအောင် အဓိက […]
Facebook Pageရှိနေပြီဘဲ ဘာကြောင့် websiteလိုအပ်တာလဲ?
WordPressရဲ့ SEOအကြံပေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ‌ရေဘက်ခါဂေးလ် ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ် “လူတွေက သူတို့မှာ Facebook Page ရှိနေပြီဘဲ၊ အဲတော့ Websiteတော့ မလိုတော့ဘူးလို့ ပြောတဲ့အခါ ကျွန်တော်အမြဲတမ်း ပြန်ပြောဖြစ်တာက သင့်မှာ Facebook Pageရှိတာမဟုတ်ဘူး Facebookမှာ သင့်နာမည်နဲ့ Pageတစ်ခုရှိနေတာလို့ ပြန်ပြောဖြစ်ပါတယ်”။ဟုတ်ပါတယ်၊ လုပ်ငန်းတော်တော်များများ မှားတတ်ကြတာက သူတို့အမြင်မှာ လူတိုင်းက Facebookပေါ်မှာရှိတယ်၊ Facebookဆိုတာ အခမဲ့သုံးလို့ရတယ်၊ အဲ့တော့ Facebookဘဲ သုံးကြတာပေါ့ ဆိုပြီး အထင်မှားတတ်ကြပါတယ်။ Facebookသုံးခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့ အများကြီးပါ။ လူအသုံးများဆုံး ဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်တာ၊ customer data analystအလွယ်တကူပြန်လုပ်လို့ရတာ၊ ကြောငြာရောက်ရှိနိုင်မယ့်နေရာ တိကျကျယ်ပြန့်တာ… စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သိထားရမှာက သင်ကတကယ်တည်း facebook pageရဲ့ ပိုင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ […]
How to Fix “Your Connection Is Not Private” Error on Chrome and Safari
Under how to
Website security isaserious matter, which is why modern browsers have in-built features that would alert you whenever there’saproblem with the connection, or if your connection might be unsafe. One of the most common errors you will see is the “Your connection is not private” error. If […]
Buy Domain .com
09-265159420 , 09-265158513
Copyright (c) 2021 GMO-Z.com ACE Co Ltd. All Rights Reserved.